Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Nty sy Nday: Aza sokajiana ho dondrona hatrany ny vahoaka e!
Rechercher Valider	Nty sy Nday: Aza sokajiana ho dondrona hatrany ny vahoaka e!	Imprimer	Nirehareha ho nahavita be na dia nohelingelenin’ny asa fanakorontanana maroloha aza ny Praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana tamin’ny zoma, nandritra ny lahateny nataony tamin’ilay lanonam-panjakana noho ny Asaramanitrya ny taona vaovao. “Maherin’ny 25 kilao ny volamena tra-tehaka nokasaina hiondrana an-tsokosoko teny Ivato”, hoy izy, “ary maherin’ny 700 ny sokatra tratra”. “Tsy nisy intsony nandritra iny taona 2016 iny ny fanondranana andramena”, hoy ihany izy.
Tsy manamaivana ny ezaka vita izahay fa misarika ny fisainan’ny vahoaka hatrany kosa hoe “aoka isika tsy hanaiky hofitapitahina sy horebirebena eto e!”
Ekena ary tsy iadian-kevitra fa nisy ny nahavitana nanasarona izany volamena maherin’ny 25 kilao izany sy izany sokatra 700 izany teny Ivato. Tsy manala ny andraikitry ny fitondram-panjakana momba ny fivoahan’ny volamena amin’ny taoniny isakerinandro eto anefa izany, ka nahoana no iniana tsy nambaran’ny Praiminisitrra Solonandrasana Olivier Mahafaly?
Raha ny any Ikongo fotsiny no asian-teny dia indroa isan-kerinandro no tonga any ny fiaramanidina helikaoptera maka volamena.
Maty antoka ny mpitrandraka ao, izay vahiny manana fitaovana goavana sady raitra, raha volamena iray kilao na 30 kilao no hotaterina amin’ny fiaramanidina toa izany. Tsorina ny resaka fa an-taoniny ny volamena miala ao amin’io Ikongo io, ary isan’ny nanamafy ny fisian’io fiaramanidina helikaoptera maka volamena any Ikongo io ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana, Brunel Razafitsindraofa.
Dia milaza ve ny mpitondra fanjakana fa raha nahatratra volamena 25 kilao teny Ivato dia hoe niasa ka nahitana vokatra sy fahombiazana ny natao?
Sa efa vita tsikombakomba tany an-dapa tany ny fanomezana alalana an’ireo vahiny hitrandraka volamena any Ikongo sy ny fanondranana izany mankany ampita? Tsy any Ikongo ihany no isehoan’izany an! Amin’ny faritra maro, ary tsy volamena ihany koa fa vatosoa saro-bidy toy ny safira koa.
Ka aza mifanambanimbany eto fa samy olom-pirenena saro-piaro amin’ny ho avin’ity vahoaka sy ny tanindrazana ity isika. Fanambaniana anay olom-pirenena tsotra ny filazana fa “nahatratra volamena mihoatra ny 25 kilao ny tompon’andraikitra”, dia mirehareha aoka izany manampempo ny vahoaka, nefa ny tsikombakomba ataonareo mpitondra any ambadika, mamoaka volamena an-taoniny mankany ampita. Dia mankaiza ny tombontsoam-bahoaka amin’izany rehetra izany?